Bellevue SEO Ndụmọdụ
Ọ bụrụ na azụmahịa mpaghara gị adịghị na peeji mbụ nke Google, ndị asọmpi gị na-ewere ihe karịrị 85% nke ndị ahịa gị.
Ọ bụrụ na ị nwere azụmahịa mpaghara, ị maraworị na ọ dị mkpa ịkwado na nsonaazụ ọchụchọ mpaghara. Ugbu a, ịntanetị abụrụla ndị na - azụ ahịa isi iyi na - echigharịkwuru maka ozi azụmahịa mpaghara, ịghara igosipụta na nchọta mpaghara dị ka ọ dị na ịntanetị.
Nnyocha mpaghara na-eme ka 50% nke ndị na-achọgharị ekwentị na-eleta azụmaahịa mpaghara n'ime ụbọchị. Ọbụna ihe dị mkpa bụ na Google agbanweela ya ịchọ algorithm iji nye ọkwa dị elu na weebụsaịtị ndị kachasị maka ekwentị mkpanaaka.
96% nke ndị na-azụ ahịa na-eji ịntanetị eme ihe mgbe ha na-enyocha ngwaahịa na ọrụ mpaghara.
94% nke ndị ọrụ ama ama achọala ozi mpaghara.
Inwe weebụsaịtị maka azụmahịa gị dị mkpa, mana ọ dị mkpa ka edebe ebe nrụọrụ weebụ gị maka ihe ndị ahịa gị na-achọ. 36% nke ndị na-azụ ahịa na-ekwu na ebe nrụọrụ weebụ a haziri nke ọma na-enye azụmahịa na mpaghara ka ịtụkwasị obi karị.
32% pasent nke ndị na-azụ ahịa nwere ike ịkpọtụrụ azụmaahịa mpaghara ma ọ bụrụ na ha nwere weebụsaịtị.
98% nke ọchụchọ na-ahọrọ azụmaahịa dị na peeji nke otu nsonaazụ ha nwetara.
Pasent 88% nke ndị na-azụ ahịa na-enyocha nyocha ntanetị tupu ha azụọ ọrụ mpaghara
The Google 3-Ukwu pụtara n’elu ntụpọ na 93% nke ọchụchọ na ebumnuche mpaghara. Ebe ọ bụ na Google belatara ntụpọ ndị kachasị elu site na asaa ruo atọ ọ dị oke mkpa na azụmaahịa mpaghara gị bụrụ SEO kachasị nke ọma iji ruo ebe ndị ahụ na-achọsi ike.
Nnyocha Google banyere usoro ọchụchọ mpaghara na-ekpughe na ndị na-enyocha mpaghara dị njikere ime ihe. Dị ka nchọpụta ha si kwuo, "50% nke ndị na-azụ ahịa bụ ndị malitere nyocha mpaghara na ekwentị ha gara otu ụlọ ahịa n'ime otu ụbọchị, na 34% bụ ndị nyochara na kọmputa / mbadamba mere otu ihe ahụ." Nke a na-egosi mmekọrịta kpọmkwem na ogo na ọchụchọ mpaghara nwere na okporo ụzọ ụlọ ahịa.
Dị ka otu nnyocha si Chitika, Pasent 91 nke ndị na-eme nchọpụta na-ahọrọ azụmahịa nke dị na peeji nke otu na nsonaazụ ọchụchọ ahụ. Na mgbakwunye, ọnọdụ izizi izizi dị na peeji nchọta nchọta ihe na-enweta pacenti iri atọ na atọ.
isenselogic.com nwere ọtụtụ afọ na-enyere aka na obere ụlọ ọrụ aka ịre ahịa n'ịntanetị na SEO na-agba izu. Anyị nọ ebe a iji nyere azụmahịa gị aka ịga nke ọma. Kpọtụrụ anyị taa maka a free SEO website na nyochaa na isiokwu ọchụchọ maka azụmahịa gị. Ọrụ anyị na-ekwe nkwa. Ọ bụrụ n ’afọjughị afọ anyị ga-eweghachi ụgwọ ọ bụla ma ị nwere ike kagbuo ọrụ anyị.
Nkwalite pụrụ iche: Kwa ọnwa, anyị ga-eme n'efu Ọrụ Bellevue SEO maka azụmaahịa mpaghara 10 maka otu ọnwa na otu isiokwu na njikarịcha na ibe. Ọ bụrụ na nsonaazụ anyị anaghị emetụ gị n'ahụ, ị ​​gaghị akwụ ụgwọ. Enweghị ego ọ bụla ma ọ bụ nkwekọrịta ịbanye.
SEO atụmatụ ọnụahịa or
Nyochaa ebe nrụọrụ weebụ na-akwụghị ụgwọ